Fampirantiana varavarana fitaratra varavarankely Shina & fanamboarana mangatsiaka kokoa ary fanamboarana | Tsara loatra
Noho ny traikefa niainany nandritra ny taona maro tamin'ny famokarana varavarana fitahirizana vata fampangatsiahana angovo, dia nanisy andalana vaovao ho an'ny vata fampangatsiahana varavarana / mangatsiatsiaka kokoa ny orinasa Fine Fine. Miorina mba hanomezana safidy bebe kokoa momba ny vokatra mpamonjy angovo sy ny vahaolana fampangatsiahana ho an'ny mpanjifanay. Manantena koa izahay fa hanome ny mpanjifa iraisam-pirenena bebe kokoa ny vokatray. Amin'ny maha mpamatsy vahaolana amin'ny fitsitsiana angovo sy ny vata fampangatsiahana azy dia hanohy hitandrina fifehezana kalitao faran'izay henjana ny so Fine ary hampitombo ny ezaka fikarohana sy fampandrosoana hanomezana vahaolana fitahirizana angovo bebe kokoa sy vahaolana ho an'ny mpanjifa.
* Rafitra mangatsiaka mahomby, famolavolana tabataba ambany.
* Ny talantalana mihetsika dia azo ahitsy arakaraka ny fepetra takiana.
* Famolavolana mivezivezy be, famindra-tena manala ny hafainganam-pandehan'ny hatsiaka.
* Ny fomba amam-baravarana havia na rihgt dia azo ovaina mahaliana ny fizarana sy ny fahaizanao manokana.
* Ny vera misy sosona roa sosona miaraka amina argon natsofoka tao, azo aseho mazava tsara ny sakafo.
* Miaraka amin'ny caster rotary, mora be ny mihetsika manodidina sy mamonjy asa.
* Ny akora anatiny dia famaohana aluminium, ka ny fahadiovana sy mahafinaritra.
* Ny jiro ambony anatiny dia afaka mamorona fotoana ara-barotra ary tsara ho an'ny dokam-barotra.
Andininy momba ny faritra.
* Compressor nohafarana: nafenina ao anaty tafontrano miaraka amina varavarankely misy poria eo afovoan'ny alokaloka ny unit compresseur, izay mety hisorohana ny fiparitahan'ny masoandro, miaraka amin'izay, fa tsy hampijaly ny hafanan'ny vatana.
* Karazan'ireto mpankafy ireto: ny karazana fampangatsiahana an'habakabaka, ny rivotra iainana vokatry ny fantson-drivotra noterena ho any anaty savony tao amin'ny kabinetra, ny fivezivezena, ny tempeature fanamiana, ny hafainganana haingana, mora ampiasaina.
* Fanaraha-maso nomerika: fampisehoana nomerika elektrika sy jiro nomerika LED ho an'ny fahamendrehana sy mora vakiana.
* Varavarana fitaratra manjelanjelatra: varavarana fitaratra roa sosona miaraka amin'ny asan'ny demist mba hanaovana insulation sy fitehirizana angovo tsaratsara kokoa. Ka tsy hisy ny rano mitete eo anoloan'ny varavaran'ny gals mba hampisehoana ny vokatra tsaratsara kokoa.
* Talantalana: ny talantalana rehetra dia azo ovaina amin'ny diplaoma 15 sy 30degree, takelaka vy mifono vy, mahazaka 300kg isaky ny metatra toradroa. Fitaovana tsara kalitao, tsy harafesina mihitsy.
* Jiro LED: mitsitsy angovo, mamiratra ary miasa mandritra ny fotoana lava. Matetika izahay dia mampiasa jiro LED 90cm na 120cm, miankina amin'ny haben'ny vata fampangatsiahana.
Teo aloha: Varavarana Silk Print Glass ho an'ny Kabinetra divay na Refrigerator Mini Bar
Manaraka: Varavarana fitaratra sy zava-pisotro matihanina matihanina
China Compressor divay mangatsiaka ary Fan cooling vata fampangatsiahana
China Deep Freezer sy ny vata fampangatsiahana
China Showcase sy vata fampangatsiahana
Vata fampangatsiahana varavarana fitaratry ny varotra
Cooler tavoahangy varavarana fitaratra
Cooler zava-pisotro sy zava-pisotro matihanina
Vata fampangatsiahana mandeha amin'ny varavarana fitaratra